ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 149
လရောင်ဆမ်းသော ခရောင်းလမ်း မောင်စံ (တောင်ငူ) ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ဘဝက ခါးသီးလွန်းလို့ ပြန်ကိုမတွေးချင်တော့ဘူး၊ တွေးမိတိုင်း မချိအောင်ခံစားရတယ်၊ တကယ်ပါ…။ အဖေနဲ့အမေ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို ကျမတို့ကို ကျောခိုင်းသွားတော့ ကျမအသက်က ဘာရှိဦးမှာလဲ၊ (၈) နှစ်ပေါ့၊ ညီမလေး မယ်ချုံက (၅) နှစ်၊ အငယ်ဆုံးမလေးဆို အဖေ အမေကိုတောင် ပီပီသသ မခေါ်လိုက်ရရှာဘူး။ ကျမအထက်မှာ အစ်မ နဲ့ အစ်ကိုရှိသေးတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့လည်း အားကိုးရာမဲ့သွားပြီဆိုတော့ မလုပ်တတ် မကိုင် တတ် တနေ့တနေ့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေ ပိုအားငယ်သွားမှာစိုးလို့ ကျမတို့မသိအောင် တိတ်တိတ်လေးပဲ ကြိတ်ငိုကြရှာတယ်။ အစ်ကိုငယ်ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကိုရင်ဝတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်နေတာမို့...
ဦးဥတ္တမ ငယ်ဘ၀ မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ သောတရှင်များကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် မားအေျးစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေးကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန် ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ……. ကမ္ဘာ့နှစ်အကူးပြက္ခဒိန်မှာ ကြည့်လိုက်ဆိုရင် ကိုယ့်အမိနိုင်ငံအတွက်ဆို “လွတ်လပ်ရေးမင်္ဂလာအချိန်” ဟာ ပထမ တာထွက် အရေးထားရမယ့် ရက်မြတ်လို့ အမြဲသတိချပ်လာခဲ့ပါတယ်။ သည်အမိနိုင်ငံပိုင် မြေပေါ်မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်း နောင်ရင်းဆွေသား မောင်နှမများလုံးကို နယ်ချဲ့လူမျိုးခြားသူတပါးတို့ လက်အောက်က “လွတ်လွတ်ကင်းကင်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းနေရခြင်း” ဆိုတဲ့ ပီတိအကျိုး အမျိုးသိက္ခာပြန်ရလာအောင် စွမ်းဆောင်လမ်းပြ လှုံ့ဆော်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေရဲ့လို့ ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်း အရင်နှစ်ပတ်က ‘ဆီးပန်းနီ’ ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းပြောရင်း စထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့တော့ မာအေးတို့တတွေက –...
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ တတိယပိုင်း Academic Weekly Educational Journal Vol2 N0.28 ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ရန်ကုန်မြို့ မျက်မမြင်ကျောင်း (ခ၀ဲခြံ)တွင် ဇွန်လ (၈)ရက် (၉)ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ပညာရေးညီလာခံ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုညီလာခံသို့ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဇနီးတက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း တို့ကို ဖိတ်ကြားသဖြင့် တက်ရာက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုညီလာခံသို့ ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခြင်း၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ တက်ရောက်သော ပညာရှင်များ၏ ပြောဆိုချက်များကို မှတ်သားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဇနီးတို့သည် ကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်သည့် အလားတူ၊ မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်စီဖြင့် သွားရောက်ကြပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းသားများနှင့် မတူညီသော အချက်မှာ ထိုညီလာခံကို အပြည့်အ၀...
ဂျူး (အသံထွက် ဝတ္ထု) မိုးမခ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ စာရေးဆရာမ ဂျူး (ခေါ်) ဒေါက်တာ တင်တင်ဝင်း (၁၉၅၈-) “… ကျွန်မ အကြောင်းကို သူတပါးအား ပြန်လည် ပြောပြလိုသူ တယောက်သည် ‘’အရပ် အလွန် နိမ့်သော’’၊ ‘’စကား အလွန် ရှားပါးသော’’၊ ‘’အားမနာ တတ်သော’’ ဟူသည့် နာမဝိသေသနများကို အသုံးပြုလိမ့်မည် ထင်သည်။ ထိုစကားများထက် ပြည့်စုံဖို့ လိုအပ်သေး၏။ ဂစ်တာတွင် အောက်ဆုံးက သေးမျှင်သော၊ တင်းမာသော၊ စူးရှသော ‘’တစ်’’ ကြိုးသည် ကျွန်မ ဖြစ်၏။ ဖဲကြိုးတပ် ဆံပင်နှင့် ဘယ်တော့မှ ဦးမညွတ်သော ကော်ပတ်ရုပ်ကလေးသည် ကျွန်မ ဖြစ်၏။…”...
အုန်းနုိုင် ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ● ဦးနု အစိုးရ ရက်တွေ တရွေ့ ရွေ့ နဲ့  ကုန်လာပြီး.. ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကလည်း ရက်ရင့်လာပြီ…။ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခေါ်ထားတဲ့ အရေးပေါ်ညီလာခံနဲ့  လွှတ်တော်တောင် ရက်နီးလာပြီ။ မြို့ မှာ အုပ်ချုပ်ရေးကို ကောင်စီက မကြီးကြပ်နိုင်.။ဗိုလ်မှူးထိန်ဝင်းကလည်း တာဝန်လွှဲယူဖို့ ဖိအားတွေပေးနေတော့ ..လုပ်ရကိုင်ရနည်းနည်း ကြပ်တည်း ခက်ခဲလာပါတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်လည်း ကြားဖြတ်အစိုးရရဲ့  ညွှန်ကြားချက် အောက်မှာလုပ်ရင် ….နည်းနည်းပိုပြီး စည်းကမ်းတကျ ဖြစ်လာမယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရကိုမျှော်ပါတယ်။ ရေဒီယိုမှာ တစ်နေ့ပေါ်လာနိုး နဲ့ စောင့်မိပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့  မှာတော့ ...
အမေများနေ့ ဆိုလို့ … တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ (၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ အတွေးအမြင် ၁၈၆) သမီးဂျူနီယာက ဂျာနယ်ထဲက ကြော်ငြာစာရွက်ကိုပြပြီး “မေမေလိုချင်တာ ရွေးလေ။ သမီးဝယ်ပေးမယ်“ ဟု ပြောလာပါတယ်။ သူပေးလိုက်တဲ့စာရွက်မှာရေးထားတာက City Mart က Mother’s Day Special ကြော်ငြာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ “မေမေလိုချင်တာ ပါချင်မှ ပါမှာ“ လို့ လဲ ဆက်ပြီးပြောသွားပါတယ်။ သမီးပေးသွားတဲ့ ကြော်ငြာလေးကြည့်ပြီး အမေများနေ့ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲက စွယ်စုံကျမ်းကို လှန်လှောပြီး ရှာကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာရေးထားတာက ’’အမေများနေ့ကို မိခင်အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် မေလ၏ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။ ထိုနေ့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ၁၉၁၄ခုနှစ်တွင်...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ မြန်မာ့ရာဇဝင်က သူရဲကောင်း ငခင်ညို။ ငယ်စဉ်က မြန်မာ့သမိုင်းသင်သောအခါ ငါးစီးရှင်ကျော်စွာ၏ ကျွန်ယုံတော် ငခင်ညိုအကြောင်း ဖတ်ရသည်။ အဲသည်တုန်းက ခေါင်းထဲတွင် မရှင်းခဲ့တာ အမှတ်ရသည်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်သည့် အခါ ငခင်ညို၏လုပ်ရပ်က ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အတော်မျက်စိလည်စေ သောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု သဘောပေါက်သည်။ ငခင်ညိုသည် ဘယ်သို့သောသူ ဟူ၍ ကျွန်တော်တို့အား သင်ကြားခဲ့သလဲ။ သမိုင်းစာအုပ်ထဲ (မှန်နန်းရာဇဝင်ထဲ) ပြန်ကြည့်သည့်အခါ ငခင်ညိုကို “ကျေးဇူးသိတတ်သော သူရဲကောင်း” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၄င်းဖော်ပြချက်ကို အနည်းငယ် ချုပ်၍ ပြောရသော် ပင်လယ်မြို့စား ငါးစီးရှင်ကျော်စွာက စစ်ကိုင်းမင်း အသင်္ခယာစောယွမ်းကို...
ငြိမ်းချမ်းအေး မိုးမခ ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၄ ဇော်ဝင်းထွဋ် (၁၉၆၄-) ဓာတ်ပုံမျှဝေသူ – မျိုးသော်ထွန်း ဒီကနေ့ဟာ တခေတ် တခါက ရော့ခ်သီချင်း အပြင်းစားများ နဲ့ လူငယ် အများအပြား ရဲ့ ရင်ဘတ်နှလုံးသား ကို သိမ်းပိုက် နန်းစိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့ဂီတလောက ရဲ့ အထင်ကရ ကြယ်ပွင့် ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ ရွှေရတု မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် ဆိုတာဟာ လူ့ဘဝ မှာ ရာစု ဝက် ခရီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်တဲ့ အတွက် လူတိုင်း အတွက် အရေးပါလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်စနိုး အိမ်နာမည် “ကိုညီထွဋ်”...
ဇေယျသုခ အရှင်နန္ဒဝံသ (ရမည်းသင်း) ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၄ ● နယူးယောက်ခဏ ရောက်ခဲ့ရ ဘာလိုိုလိုနဲ့မိမိနေရာ ကျောင်းကနေ သုတ ပညာတွေ ဖွေရှာဖို့ ခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ရာ တစ်လနီးနီးပင် ရှိတော့မည် ။ ဆောင်းတွင်းကာလမို့ ကျောင်းဝိုင်းအတွင်း ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးတွေက် အစပျိုးလို့ မဖြစ်သေးချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်နေခဲ့ခြင်းပါ ၊ ယနေ့မှာတော့ နယူးယောက် မြို့တော် ၊ ဘရုတ်ကလင် ဘာဂင်လမ်းရှိ လောကချမ်းသာကျောင်းကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ရထားပေါ်တက်စဉ်မှာပင် အသက်ကြီးကြီး ဒကာမကြီး တစ်ဦးက ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လာတယ် ၊ နာမည်မသိပေမဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးသူ တစ်ဦးလို့ပဲ ကောက်ချက် ဆွဲမိတယ် ..ဘယ်သွားမလို့လဲ မေးကြည့်မိတော့ ကျောင်းသွား ဓမ္မသင်တန်းတက်မလို့တဲ့ ၊ အသက်ကြီးပေမဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့...
သားကြီးမောင်ဇေယျ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၄ ကျနော် အမေ့အိမ်နား ရောက်လေလေ ရင်ထဲတဒိန်းဒိန်းခုန်လေလေပါ။ ကျနော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ သီပေါထောင်က လွတ်လာပြီး ရန်ကုန်ကိုရောက်ရောက်ချင်း မေမေနဲ့တွေ့ဖို့သွားတာပါ။ ကျနော့်ညီနဲ့ ညီမ တွေက ကျနော်ထောင်ကျနေတာကို မေမေ မသိအောင် ဖုံးထားကြပါတယ်။ ဒီတခါ ထောင်ကျတာက ၁၉ နှစ်။ မေမေက အသက် ၈၀ ကျော်ပြီ။ အသိပေးလို့ မဖြစ်ဖူးလေ။ မတော်တဆ တခုခုဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။ x x x မိုးကုတ်မှာ ကျနော်နေခဲ့တာ နှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကျောက်ပန်းချီလုပ်ငန်းကို အကြောင်းပြုပြီး ရန်ကုန်ကို ပြန် လည်အခြေချခဲ့ပါတယ်။ ‘သားကြီးရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့...
Page 149 of 179«1...147148149150151...179»